Monte-Carlo Bay Hotel & Resort inorova goridhe
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Monte-Carlo Bay Hotel & Resort inorova goridhe
Hotera & Resorts • Monaco Kupwanya Nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort yaive imwe yemahotera ekutanga muPrincipality kugashira Green Globe Certification yezvakatipoteredza muna 2014.
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort ndiyo piyona anotungamira mukusimudzira kwakasimba uye yaive imwe yemahotera ekutanga muPrincipital kugamuchira gwaro rakakurumbira reGreen Globe kwezvakatipoteredza muna 2014. Munguva pfupi yapfuura, hotera yakapihwa Gold Certification mukuziva kuzvipira kwayo zvakasvibirira maitiro anopfuura mashanu akateedzana makore.
Green Globe's Goridhe mwero idanho rakaomarara rechitupa, iro chete rakakwaniswa neMonte-Carlo Bay Hotel & Resort neMonte-Carlo Beach kusvika zvino muhukuru.
Inzvimbo yekupayona mukusimudzira kwakasimba
Seye mureza uye mutyairi wehotera yeGreen yeSociété des Bains de Mer., Iyo Monte-Carlo Bay Hotel & Resort yakagamuchira kutanga kwayo Green Globe chitupa musi wa 23 Kubvumbi 2014. nhanho yekuita sezvinodiwa neGreen Globe yepasi rose chitambi uye mwedzi wapfuura muna Chikumi, yakapihwa zvinobudirira iyo Gold Standard.
Frederic Darnet, General Manager weMonte-Carlo Bay Hotel & Resort, akakorokotedza zvikwata zvese ndokuti, “Ichi Green Globe Goridhe Chitupa haisi magumo asi mavambo uye ndinoda kukorokotedza yedu Bay Be Green Team nekuzvipira uku kwezuva nezuva. . "Tinofanirwa kufunga nezve mamiriro ezvakatipoteredza, ehupfumi, maindasitiri uye nemagariro echiitiko chese chatinoita."
Nhengo dzechikwata dzosera kunharaunda
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort's Bay Be Green Team, yakavambwa muna2013, inoramba iri timu yakazvipira inoronga zvakatipoteredza uye zvemagariro zviitiko. Chikwata chiri kushingairira kuita mushandirapamwe wakasiyana siyana pagore rose, kuronga zviitiko zvakaita senzvimbo yemasikati neFourneau économique de Nice pamwe nesangano reSolidarpole uko Chef Marcel Ravin neboka reBay Be Green vakagadzirira uye vakapa chikafu chemasikati chevanhu mazana maviri vaida . Chikwata chakaunganidzawo matoyi neSIVOM yeRestos du Cœur, charity yechiFrench ine basa guru rekugovera mapakeji ezvekudya uye chikafu chinopisa kune vanotambura.
Pamusoro pezvo, nhengo dzechikwata dzakatora chikamu muRun No finish Line uye vakaita mamishopu ekuzivisa nezvezvakatipoteredza evana paMonacology, musha unodzidzisa wevhiki rimwe chete wevana vanobva kuMukuru nekumadhorobha ari kumiganhu. Gore rino, Bay Be Green Team yakasarudza nyaya yehutano uye yehutano apo vana vakaratidza shuga yakavanzwa mune zvavanofarira zvekudya, uye vakatamba muchero nemiriwo abecedarium chiitiko.
Michelin-nyeredzi uye akazvipira Chef Marcel Ravin
Kubudirira kwakasimba chinhu chakakosha chinotariswa mumakicheni eakavakirwa pamwe nekutenda kuna Chef Marcel Ravin, weMichelin ane mbiri chef anosimudzira mabhenefiti ekurima uye kudya chikafu chakanaka pamwe nekutora matanho ekudzivirira nyika. Chiono chake chakazara-chinosimbisa nhanho idzo chikafu chinopfuura kuburikidza kubva pasi kuenda kuplate.
Chef Marcel anoshanda pamwe naJessica Sbaraglia nekambani yake yekutanga Terre de Monaco, iyo inogadzira mapindu emumaguta emuriwo anosanganisira iyo iri kuM Monte-Carlo Bay. Kuve nemichero yemwaka nemiriwo, inokohwa padyo inonyanya kukosha kuna Chef Marcel. KuMonte-Carlo Bay siginecha yekudyira, Blue Bay, zvigadzirwa zvakatora matanho mashoma kubva kukicheni iri pakati pezvose ndiro. Uye zvakare, gore rapfuura iyoresitorendi yakasaina iyo Mister Yakanaka Hove bumbiro, iyo inonyora inokurudzirwa mwaka yemarudzi nekudaro inoremekedza emuno marine zviwanikwa.
Green Globe ndiyo yepasi rose yekusimudzira sisitimu yakavakirwa pamatanho anotambirwa epasi rese ekuchengetedza mashandiro uye manejimendi emabhizimusi ekufamba uye ekushanya Inoshanda pasi pezenisi repasirese, Green Globe iri muCalifornia, USA uye inomiririrwa munyika dzinopfuura makumi masere nematatu. Green Globe inhengo yakabatana yeUnited Nations World Tourism Organisation (UNWTO). Kuti uwane ruzivo, ndapota shanya www.vaperempire.com.